Qalabka Wax-soo-saarista Mawduuca ee ku-habboonaanta Mass
Tixgelinta Mass: Qalabyada looga faa'iideysanayo Soo-koobidda Mawduuca
Sabti, Agoosto 4, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qaar idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay weyddiiyaan waxa nuxurka koorsadu yahay. Waxaa jira mug qosol ah oo ka kooban waxyaabo lagu daabacayo websaydhka iyada oo loo marayo Twitter, Facebook, blogs, wararka, Youtube iyo warbaahin kale. Fursadaha ayaa ah in qaar ka mid ah waxyaabahaas ay qiimo u leeyihiin dhagaystayaashaada - laakiin waxay u baahan tahay qaar falanqaynta, shaandhaynta iyo soo bandhigida qaab waxtar leh. on Martech Zone, waxaan daaweynaa waxyaabo badan. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa sawir-qaadista. In kasta oo aan ka helno tiro ka mid ah, waxaan ka taxaddarreynaa dib-u-eegista, kala-shaandheynta, falanqaynta iyo sharraxaadda sababta ay ugu habboon yihiin dhagaystayaashayada iyo sidoo kale waxa ay fikraddeennu noqon karto.
Soo-koobidda Mawduucyada ayaa waxtar weyn u yeelan kara astaantaada iyo beddelaadda goobta sidoo kale. Ka fikir haddii aad ku dari lahayd quudinta tooska ah ee faallooyinka bulshada, dib u eegista iyo fariimaha qoraalka ee boggaaga macaamiisha faraxsan ee waqtiga dhabta ah. Taasi waa waxyaabo qiimo leh… iyo laga yaabee inay aad uga saameyn badan yihiin heerka markhaatiga caadiga ah ama astaanta macmiilka. Tani waxay u baahan tahay qalab abuuritaan.
Ficilka ku-xirnaanta waxyaabaha ayaa ah mid aad u xoog badan. Kaliya xafiiskayaga gudahiisa, waxaan dhamaanteen aqrinaa ilo dhowr ah maalin kasta, waxaan leenahay kormeer bulsheed oo nagu riixaya macluumaadka nagu saabsan macaamiisheenna iyo tartamayaasha ay leeyihiin, iyo digniinta Google ee la socota maqaallada cusub ee shabakadda. Waxaan si adag u shaqeyneynaa inaan ku karkarino mid kasta oo ka mid ah ilahaas qaybo kooban oo macluumaad ah oo aan u diri karno macaamiisheenna si ay ula socdaan waxyaabaha la socda. Waxay ubaahantahay isku-dhaf caqli, khibrad iyo tikniyoolajiyad si ay si sax ah ugudhacdo… waana geedi socod dhaqaaq ah oo si isdaba joog ah isubedelaya.
Tusaalaha ugu weyn ee kahadalka waxyaabaha waa sida telefishanku u muujiyo daabacaadda cusboonaysiinta twitter-ka ee laga yaabo inay caan ku yihiin dhagaystayaashooda daawashada. Nidaamku ma fududa - tweets-ku waxay u baahan yihiin inay ahaadaan kuwo khuseeya, aan qaali ahayn oo madadaalo leh.
Muhiimadda Mass waa madal daruur ku saleysan oo u oggolaanaysa suuqleyda iyo warbaahinta inay daweeyaan tiro badan oo ka kooban kana faa'iideystaan ​​dhagaystayaashooda. Barmaamijka 'Mass Relevance platform' wuxuu ka soo saaraa waxyaabaha ku habboon Twitter-ka iyo shabakadaha kale ee bulshada, wuxuu kala sifeeyaa wadahadallada laga soo saaray sharciyada isticmaalaha lagu qeexay, wuxuuna u abuuraa aragtiyo ay suuqyadu ku dhex galaan websaydhka, oo ay ku jiraan barnaamijyada moobiillada, lagu soo bandhigo shaashadaha TV-ga, lagu dhajiyo goobaha bakhaarka , ama wax kale samee.
Muhiimadda Mass waxay siisaa suuq-geynta taxane ah qalab horay loo dhisay ama modullo, kuwaas oo si madaxbanaan ula shaqeeya is-dhexgalka adeegsadayaasha heeganka ah, ama qayb ka mid ah barxad ballaadhan oo isku-darka laba qaybood ama ka badan.
Qalabka ama modules la bixiyo waxaa ka mid ah:
Waxsoosaarka Kordhinta sida Qiimeyn Balaadhan si aad uqabato qiimeynta xiddigaha la soo dhejiyay iyo Qeexitaanno Baahsan si loo qabsado wadaagista bulshada.
Alaabada kaqeyb galka sida Isbeddellada Mass kuwaas oo muujiya isbeddellada dhaqdhaqaaqa bulshada, Durdurro Ballaaran kaas oo daaha ka qaada wada hadalka bulshada isla markaana doorta muuqaalka saxda ah, Gallery Mass kaas oo abuuraya darbi sawir muuqaal leh oo leh sawirro ka socda durdurrada bulsheed ee kala duwan, Hogaamiyaha Mass kaas oo bixiya darajo bulsheed isla markaana dhiirrigelisa kuwa ugu firfircoon bulshooyinka dhagaystayaasha ah, Khariidado tiro badan - kaas oo soo bandhigaya waxyaabaha bulshada ay ka kooban tahay juqraafi ahaan, Tirinta Mass kaasoo iftiiminaya mugga waxqabadka bulshada ee dhacaya.
Alaabada isdhaxgalka sida Jawaabaha Mass kaas oo u oggolaanaya suuqleyda inay si toos ah ugu dhajiyaan dhagaystayaasha isla markaana xakameeyaan durdurrada jawaabaha iyo Codbixinno tiro badan taas oo awood u siinaysa codbixinta bulshada.
Muhiimadda Mass waxay bixisaa xalalka soo-socda ee isku-darka isku-darka mid ama in ka badan oo ka mid ah aaladaha kor ku xusan:
Companion kaas oo isku daraya waxyaabaha firfircoon ee ka dhex socda warbaahinta bulshada.
kaari kaas oo isku daraya waxyaabaha bulshada ka kooban mowduuc ama shey.
Flock-To-Unlock si loo bixiyo nuxur khaas ah oo laga heli karo ka qaybgalka bulshada
soo jireen, muraayadaha isku dhafan ee isku dhafan oo bixiya isku darka dhammaan howlaha bulshada qaab qaabeysan oo fududahay in la xakameeyo
Isticmaalka Muhiimadda Mass, suuqleyda ayaa xakamayn kara ama dhexdhexaad ka noqon kara wax kasta oo dhaca oo la xiriira astaanta goobta warbaahinta bulshada. Faa'iidooyinka isdhaxgalka ayaa loo gudbiyay macaamiisha iyo rajada waxay sare uqaadeysaa khibradooda waxayna siineysaa baaxad si wanaagsan looga wada qeyb qaato.
Tags: maadooyinka la isku qurxiyodardargelintaisku xirnaantacurashada twitter
Is-weydaarsiga Suuq-Baadhka ah: Goobta, Raadinta, Fulinta
Khaladaadku waa Cadawgaaga SEO